Messi oo Real uga digay isla jaanqaadida Neymar – SOOMAALPEDİA
Gool dhaliyaha xulka qaranka Argentina iyo kooxda Barcelona ee Lionel Messi ayaa Real Madrid digniin ugu diray in is fahanka isaga iyo Neymar uu horumar wayn sameeyay.
Labadan laacib ee ree koonfur Amerika, xili ciyaareedkan soo ban dhigay is fahan layaableh, waxaana ugu danbaysay kulankii ay Ajax xalay qaybtii hore ee ciyaarta labada gool kaga dhaliyeen. Messi ayaa inta badan xili ciyaareedkan Neymar ka caawiyay inuu goolal badan u dhaliyo kooxdiisa Barcelona, wuxuuna Neymar 10 kii kulan ee ugu danabeeyay Barcelona u dhaliyay 10 gool.
Kulanka Sabtida ee Clasico ayuu Messi rajaynayaa inuu lamaanaha weerar ee Messi iyo Neymar si fiican u shaqayn doono.
Messi ayaa yidhi: “Nasiib wanaag hadda si fiican ayaanu isku fahanaa si aanu kooxda goolal ugu dhalin karno.Waxaanu wax fiican ka rajaynaynaa Luis Suarez. Suarez waa weerar yahan fiican wuxuuna nasiin doonaa awood dheeraad ah”.
Real Madrid ayaa sabtida Santiago Bernabeu ku soo dhawan doonta kooxda ay colaada wayni ka dhaxayso ee Barcelona, waxayna iska hor imanayaan iyagoo labada kooxoodba ku jira qaab ciyaareed fiican. Real Madrid ayaana ah kooxda ugu gool dhalinta badan horyaalka La ligaha Spain halka Barcelona ay haysto rekoodhka kooxaha Yurub ee ah inay shabaqeeda gool ka illaalisay sideeda kulan ee horyaalka ugu horeeya.